Musiibada Dhaawacyada Real Madrid Oo Halkeeda Kasii Socota Iyo Xiddig Laf-dhabar Ah Oo Muddo Muddo Dheer Garoomada Ka Maqnaan Doona - Gool24.Net
Musiibada Dhaawacyada Real Madrid Oo Halkeeda Kasii Socota Iyo Xiddig Laf-dhabar Ah Oo Muddo Muddo Dheer Garoomada Ka Maqnaan Doona
Real Madrid ayuu usoo yeedhay war aad u xun oo hurdada u diiraya tababare Zinedine Zidane, waxaana lagu wargeliyey in laacibka laf-dhabarta u ah Dani Carvajal uu jilibka kasoo gaadhay dhaawac halis ah oo aanu beryahan ugu soo laaban doonin.
Dani Carvajal oo jilibka dhaawac kasoo gaadhay kulankii Real Betis ayaa baadhitaano lagu sameeyey waxay soo saareen in dhaawaciisu culus yahay, isla markaana uu garoomada ka maqnaan doono muddo laba bilood ah, taas oo Zinedine Zidane ku ridi doonta madax-xanuun iyo xulasho yaraan.
War-saxaafadeed ay Real Madrid soo saartay ayay ku xaqiijisay in baadhitaannadii lagu sameeyey Cavajal lagu ogaaday in carjowda jilibka lugta midig ay waxyeello kasoo gaadhay, isla markaana xaaladdiisa soo kabasho la qiimayn doono.
Dhaawaca Carvajal ayaa waxa uu fursad siin doonaa Alvaro Odriozola oo aan kalsooni badan lagu qabin, isla markaana kusoo bilowday ciyaartii Valladolid ee Arbacadii, taas oo uu kusoo bandhigay ciyaar wanaagsan.
Odiozola oo qaybtii dambe ee xili ciyaareedkii hore amaah ugu maqnaa Bayern Munich, ayaa waxay buuxinta booska Carvajal ku tartami doonaan Lucas Vazquez, laakiin haddii loo baahdo, waxa uu Zidane ka ciyaarsiin karaa Ferland Mendy.
Dani Carvajal waxa uu seegi doonaa kulanka hore ee El Clasico ee Barcelona iyo kulamada kale ee Levante, Cadiz, Huesca, Valencia iyo Villarreal oo dhamaantood horyaalka LaLiga ah, waxaana u raaci doona afarta ciyaarood ee hore ee wareegga Grouy-yada tartanka Champions League oo uu ka maqnaan doono.
Laacibkan ayaa liiska dhaawacyada kaga daba tegayy Eden Hazard, Eder Militao iyo Toni Kroos oo dhamaantood u jiifa dhaawacyo soo gaadhay.
Marka laga yimaaddo Real Madrid, waxa kale oo Carvajal laga tebi doonaa xulka qaranka Spain oo uu udub-dhexaad u ahaa, waxaana uu tababare Luis Enrique ku qasban yahay inuu ka saaro liiska xulka oo uu kusoo darsaday gellinkii hore ee maanta.